Kusukela esikhathini sokudala, ngaphrofetha ukuthi ezinsukwini zokugcina ngizokwakha iqembu labantu elizoba nomqondo owodwa nowami. Ngikubikezele ukuthi emva kokusungula isibonelo emhlabeni ezinsukwini zokugcina, ngizobuya ngize endaweni Yami yokuhlala. Lapho sonke isintu sesinganelisile, sizobe sesizifezile izidingo Zami, ngeke ngisadinga lutho kuso. Esikhundleni salokho, isintu Nami siyoxoxelana izindaba zezinsuku zethu zakudala emva kwalokho siyohlukana. Ngiqala ukwenza lo msebenzi bese ngivumela isintu ukuba sizilungiselele ngokomqondo. Ngizokwenza sonke isintu siqonde izinhloso Zami ukuze kungenzeki singiqonde kabi noma sicabange ukuthi nginonya noma anginanhliziyo, okungeyona inhloso Yami. Ngabe isintu siyangithanda nokho siyenqaba ukungidedela ngibe nendawo efanele yokuphumula? Ngabe isintu asizimisele ukucela uBaba osezulwini enzela Mina? Ngabe umuntu akakaze achithe izinyembezi zokuzwelana Nami? Asisizanga na isintu ekufezeni umhlangano ophuthumayo Kithi singuBaba neNdodana? Kungani singazimisele manje? Umsebenzi Wami emhlabeni usufeziwe futhi emva kokwehlukana nesintu ngizoqhubeka nokusiza isintu, akukuhle lokhu? Ukuze umsebenzi Wami ube nomphumela omkhudlwana futhi ukuze usize ndawo zombili, kufanele sehlukane nakuba kubuhlungu ukukwenza. Izinyembezi zethu zizowa buthule ngingabe ngisasithethisa isintu. Esikhathini esedlule, ngisho izinto eziningi eziyihlabile inhliziyo yesintu uqobo, zenza ukuthi sikhiphe izinyembezi zosizi. Ngalokho, ngiyaxolisa esintwini futhi ngicela ukuba isintu singithethelele; ningangifisi futhi ningangizondi ngokuba konke engikushilo bekuhlose ubuhle besintu. Ngakho ngethemba ukuthi isintu sizoyiqonda inhliziyo yami. Ezikhathini ezedlule sibe nengxabano, kodwa uma kubhekwa emuva, sobabili sizuzile. Kulezi zingxabano uNkulunkulu nesintu babe nebhuloho lobungane elakheke phakathi kwabo, akuzona lezo izithelo zemizamo yokusebenzisana kwethu? Kumele sonke sikujabulele lokhu. Ngicela umuntu ukuthi awathethelele “amaphutha” Ami akuqala kanti neziphambeko zomuntu nazo zizokhohlakala. Uma nje umuntu ekwazile ukubuyisa uthando Lwami ngesikhathi esizayo, lokho kuzoletha ukunethezeka eMoyeni Wami ezulwini. Angazi ukuthi isinqumo somuntu siyini kulokhu, ukuthi umuntu uzimisele yini ukufeza isicelo Sami sokugcina noma cha. Angiceli lutho olunye kumuntu, kuphela ukuthi angithande, futhi lokho kwanele. Kungenzeka lokhu na? Mazedlule zonke izinto ezingemnandi ezenzeke phakathi kwethu esikhathini esedlule, makube nothando njalo phakathi kwethu. Nginikile umuntu uthando olukhulu kangaka kumuntu, nomuntu ukhokhe kakhulu kangaka ukungithanda. Ngakho ngethemba ukuthi isintu siyalwazisa uthando olumangalisayo futhi olungenasici phakathi kwethu ukuze uthando lwethu lwedlulele emhlabeni womuntu luphinde lwehlele phansi okokuphela. Uma siphinda sihlangana, masiphinde sihlanganiswe wuthando ukuze uthando lwethu luqhubekele ekuphileni kwaphakade futhi ludunyiswe luxoxwe yibo bonke abantu. Lokhu kuyonganelisa ngiphinde ngiveze ubuso Bami obumamathekayo esintwini. Ngethemba ukuthi umuntu uzokukhumbula konke engikubeke kuye.
Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV Isandulela Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu